Chitsauko Chitatu | Faraitose's Blog
Tikaenderera mberi nenyaya yemarovero anoita mwoyo, tinoda kunongedzera zvinotevera maererano nekutamba kunoita mwoyo nekupfura kunoita tsinga:
Mwoyo paunenge uchigwinha uchisimbarara chipfuva chichigogodzwa, muchidimbu mwoyo paunenge uri murusimba; tsinga dzeropawo dzinenge dzichizvimbiswa zvinopa kupfura, dzinenge dziri mururegerere madzo. Pamwepo kurudyi kwemwoyo pakunenge kuchigwina kuchiburitsa ropa ririmo richipinda mutsinga yeropa, iyowo inetenge ichipfura nekuzvimbiswa, zvinge zvichiitawo tsinga dzemuviri wose.
Pano mira mwoyo kuruboshe, kusina kukunga kana kupfura, kana tsingawo hadzipfure. Kana usati wasvika pakumira, paunonenge uchirova zvisina simba, waneta, kupfura kunoita tsinga kuno nzwika kurekure. Ndizvo zvimwechetewo kurudyi kwemwoyo.
Tikaenda mberi, tsingayeropa ikachekwa kana kuita buri,ropa rino buda zvinesimba kubva paronda racho nguva inenge mwoyo uchigwina, wakakunga. Ndizvo zvimwe chete kurudyi tsinga yeropa yacho ropa rinooneka richipfichukapfichuka panenge pachigwina mwoyo.
Pese pano chekwa tsinga yeropa ropa rino buda richiita kupfichikapfichuka, richisvika kurefu kana padhuze; zvinoonekera kuti kupfichuka uku kunoitika tsinga painenge iri muruzvimba, mwoyo uchi gugudza chipfuva; ndipo mwoyo paunenge uchikunga, wakasimbarara, uri murusimba nekusimukira; ndipo panofambiswa ropa kubva mumwoyo.
Tika tevedza pfungwa iyi tinenge tabva tapesana nezvino fungwa nevazhinji nekuti tavakuti tsinga inenge iri mururegera rwayo mwoyo paunenge urimurusimba rwawo; tichiti tsinga dzino zara dzichizvimbira neropa rasaidzirwamo nekugwinha kunoita mwoyo; tingato enda mberi kuti tsinga dzino zvimbira sekuzvimba kunoita dundira, kwete kuzara kunoita mvuto. Chinhu chimwe chete chinoita kuti tsinga yese mumuviri ipfure, kugwinha kunoita mwoyo; kupfura kunoita tsingayeropa yekurudyi kugwinha kwemwoyo wekurudyi.
Muenzaniso, wekupfuriswa kunoita tsinga dzose dzemuviri kwadzinoitiswa nemwoyo, kufuridzira mugirovisi kunoita kuti minwe yese ibva yazara mweya nguva imwechete. Tsingaropa dzino tevedzera ugwinhi hwemwoyo pakusimba, kuchimbidza nekudzidza kwadzo. Tisa tarisire kuti pachasiyana munguva kubva panogwinha mwoyo nekuzvimbira kwetsinga, tichiti ropa rinotora nguva kufamba nhambwe iyoyo [kunyanya tsinga dziri kure]; zvakango fanana nekuzadza dundira. Mukana uzere [sezvakaita ngoma kana rukuni rwunoti uka rova rugumo rwuno rugumo rumwe runotsenhuka nguva imwecheteyo]
Ndakamboona ndikatomboita murwere aive nehosha yakandisimbisa mukugutsikana kuti idi randabva mukureva. Mumwe murume aive nezibundu raipfura, rinonzi anyurizimu, parutivi rwemutsipa wake kurudyi. Raive panotsaukira tsingaropasubclavius yodzika muhapwa. Raive raitika nekunyenya tsinga yacho pachayo, ichi tokura zvakanyanya zuva regarega ropa paraipinda mariri mupfuro wegawega. Izvizvakatozowonekwa afa muviri wake wavhiyiwa nyama dzake dzapatsanurwa; ari mupenyu tsingabrachialis yake yaipfura zvisina simba nekuti ropa rake rakawanda retsingasubclavius raipinda mubundu richisiya shomanana kuti risvike kutsingabrachialis.
Tigona zvino kuti ropa kmumuviri kwarino tadziswa kuerera zvakanaka nekudzvinyirirwa, kuvhara kwetsinga yacho, kana kupindirwa nechimwechinhu, tsinga dzinotapudzirwa dzinopfura zvishoma. Sakiso: kupfura kwetsinga isundaira reropa riri kupindamo.